musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » Chorus Aviation Inc. inozivisa kusarudzwa kweVatungamiriri
Chorus anofara kutambira Mai Gail Hamilton, VaAlan Jenkins naVaPaul Rivett kuBhodi revatungamiriri vayo.
Chorus 'proxy denderedzwa yakapihwa kune gumi vakasarudzwa kuBhodi revatungamiriri.
Hwerengedzo yenhamba dzezvikamu zvinomiririrwa nevanogovana varipo mumunhu uye nemumiriri pamusangano yaive 60,142,910 miriyoni.
Vabati veiyo inodiwa nhamba yemasheya akavhotera vachifarira zvinhu zvese zvebhizinesi.
Chorus Aviation Inc.inoshambadza mhedzisiro yevhoti pasarudzo yevatungamiriri pamusangano wayo wepagore wevagovani wakaitwa muna Chikumi 21, 2021.
Huwandu hwese hwenzvimbo dzinomiririrwa nevanogovana varipo mumunhu uye nemumiriri pamusangano uyu hwaive 60,142,910 mamirioni uye vakamiririra 33.85% yeChorus 'yakapihwa uye migove yakasarudzika nekodzero dzekuvhota. Vabati veiyo inodiwa nhamba yemasheya akavhotera vachifarira zvinhu zvese zvebhizinesi. Chorus 'proxy denderedzwa yakapihwa kune gumi vakasarudzwa kuBhodi revatungamiriri. Yakadzama mhedzisiro yevhoti yesarudzo yevatungamiriri yakatarwa pazasi.
Amosi Kazzaz 56,232,124 93.50% 3,910,786 6.50%
Chorus anofara kutambira Mai Gail Hamilton, VaAlan Jenkins naVaPaul Rivett kuBhodi revatungamiriri vayo. Mme Hamilton aive mudiwa pamwe nevese KPMG uye Ernst & Young vachipa ongororo uye bhizinesi kuraira masevhisi kumasangano akasiyana siyana, kusanganisira akati wandei mukati meindasitiri yendege. VaJenkins vane makore anopfuura makumi maviri 'vakuru vakuru uye bhodhi ruzivo mune yekubhadhara ndege, hunyanzvi hwemari, zvekubhururuka, zvekufambisa, uye masevhisi masevhisi. Pamusoro pekubatanidza NordStar Capital (muzvinabhizimusi achangoburwa muChorus), VaRivett vakamboshanda seMutungamiriri weFairfax Financial Holdings Limited umo muna 20, vaive nebasa rekambani yekudyara madhora mazana maviri emamiriyoni muChorus yakashanda semubhadharo wembeu yebhizinesi redu renharaunda rekubhadhara ndege.
Chorus mupi wepasirese wekubatanidza matunhu emuchadenga mhinduro. Akatungamirwa muHalifax, Nova Scotia, Chorus inoumbwa neChorus Aviation Capital mudiki wepasi rose wenhandare dzendege, uye Jazz Aviation uye Voyageur Aviation.